IBasement Suite yaBucala Kufuphi neSikhululo seenqwelomoya & koohola bendlela
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguColleen
Indawo ethuleyo & yabucala enokufikelela ngokulula kwi-I-480 & Hopkins Airport (5-10 imizuzu). Indawo yokungena esecaleni yabucala w/ ikhowudi yokungena kwikhowudi yedijithali. Isihluzi se-HEPA, iBhedi yeKumkanikazi, iFuton Sofa, i-Air Mattress, i-BA egcweleyo w/ Lg Shower, iKitchenette, iNdawo yokuTya eMiselweyo, i-WiFi, i-FlatScreen TV, ipakisha & dlala. Khusela indawo yokupaka ngaphandle kwesitalato. Kufuphi ne-I-71, I-77, I-480 nokufikelela ngokulula edolophini. Isilingi kule yunithi yangasese yangasese ingaphantsi kwe-7', iindwendwe ezide zinokufuna ezinye iindawo zokuhlala. Umgangatho ophezulu yindawo yeofisi yasemini.
Nceda uqaphele ukuba iijethi kwi-tub ye-jacuzzi ayisebenzi kwaye ishawari iyakhethwa. Nceda ungazami ukususa okanye ukunyenyisa ipaneli yemibhobho yebhabhu. Kwakhona, nceda ungasebenzisi naziphi na “iibhombu zokuhlambela” okanye iityuwa zokuhlambela kwindawo yokuhlambela.
Nceda ugcine ukhumbule ukuba ifenitshala kwindawo yathengwa ngokuhambelana nemilinganiselo yemilinganiselo yomgangatho wabakhiqizi kwaye ayilungiselelwe ngokukodwa kwimithwalo ephezulu.
Nceda ungasebenzisi iimveliso zokufa ngeenwele ngelixa zisesithubeni njengoko zifuna ukucocwa kakhulu kwaye zinokungcolisa iisinki kunye neetafile.
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1, umatrasi ompontshwayo oyi- 1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
4.88 ·Izimvo eziyi-226
4.88 · Izimvo eziyi-226
Abathandi bangaphandle bayakonwabela indawo yeendwendwe 10 imizuzu ukusuka Tshixa 39 trailhead of Cuyahoga Valley National Park kunye Cuyahoga Valley Scenic Railroad.
Imizuzu eli-15 yenkonzo yokukhwela imoto ukuya edolophini eCleveland kunye nokufikelela kwindlela ekhululekileyo ukuya eCleveland esentshona, emazantsi nakwidolophu esempuma kwidolophu yemisitho okanye umsebenzi.
Indawo yasebumelwaneni izikhephe ezininzi zeevenkile zenyama zaseMpuma Yurophu, iicawe kunye neendawo zokutyela zakudala zehlabathi.
Iindawo zegalufa zikawonke-wonke ezikufutshane kunye neNdawo yeGalufa ePhezulu yokuvula kwakamsinyane ikwimizuzu kude.
Ivenkile yeedonathi, indawo yokutyela/ibha enepatio yangaphandle kunye nevenkile yeziyobisi zonke zihamba ngaphantsi kwemizuzu emi-5.
Sikhetha ukufumana imiyalezo nge-AirBnB app yeselula ngamaxesha afanelekileyo emini nangokuhlwa. Ngaphandle kokuba yimeko kaxakeka, nceda ungafowuli okanye uthumele umyalezo ebusuku kakhulu okanye kusasa kakhulu ngelixa silele. Siphendula kwangethuba kwimibuzo kwaye sinokuhlengahlengisa ubushushu besuite ukude nge-app okanye siphendule eminye imibuzo malunga neendawo zokuhlala.
Siyabuhlonipha ubumfihlo beendwendwe zethu kwaye soze singene kwindawo okanye sibonakale singaziswanga ngexesha lokuhlala ngaphandle kokwazisa undwendwe kwangaphambili. Ngokufanayo, sicela ukuba iindwendwe zethu zilihlonele ixesha lentsapho yethu kwaye ziphephe iminxeba yasebusuku okanye izicelo. Sizama ukubonelela ngamava amnandi kwiindwendwe, kodwa asibonisi ukuba sinokusebenza njenge-concierge ngexesha lokuhlala kwakho ... ubumelwane kunye nesixeko sinokuninzi esinokukunikeza!
Sikhetha ukufumana imiyalezo nge-AirBnB app yeselula ngamaxesha afanelekileyo emini nangokuhlwa. Ngaphandle kokuba yimeko kaxakeka, nceda ungafowuli okanye uthumele umyalezo ebusuk…